ई–बुक स्टोर बन्द भए पुस्तक कहाँ जान्छन् ? «
ई–बुक स्टोर बन्द भए पुस्तक कहाँ जान्छन् ?
इन्टरनेटमा विभिन्न किसिमका पसलहरू खुलेझैं पुस्तकहरूको पसल पनि खुलेका छन् । इन्टरनेट सेवा हुनेहरूले कागजको पुस्तक नकिनी इन्टरनेटबाट पुस्तक किन्ने गरेका छन् । ई–बुक सेवा दिन इन्टरनेट पसल बन्द गरे तपाईंले किनेका पुस्तकहरू पनि हराउने भएको छ । यसबारे चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
माइक्रोसफ्ट कम्पनीले ई–बुक स्टोर बन्द गर्ने भएको छ । यसबाट यसका उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने भएका छन् । तर कम्पनीले उसको इ–बुकबाट किन्ने ग्राहकहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । माइक्रोसफ्टले यसबारे अन्य केही प्रतिबद्धता जनाएको छैन । तपाईहरू विचार गर्नुस्, तपाईं माइक्रोसफ्टको ग्राहक हुनुहुन्छ, तपाईले ती पुस्तकहरूका लागि पैसा तिर्नु भएको छ । अब ती पुस्तक तपाईका भए, हैन र ?
तर अब त्यसो हुने देखिएन । यस्ता कम्पनीहरूले कुनै बेला ई–बुक स्टोर बन्द गर्न सक्छन् र तपाईका पुस्तक हराउन सक्ने भए । यस्ता टेक कम्पनीहरूले अपेक्षित फाइदा नभएका बेला यस्तो निर्णय गर्ने भए । उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुने खतरा रहेको समालोचकहरु बताइरहेका छन् ।